सबैभन्दा धेरै २७ अन्तर्राष्ट्रिय उडान, धेरै उडान कतार, मलेसिया र दुबइको – jagritikhabar.com
सबैभन्दा धेरै २७ अन्तर्राष्ट्रिय उडान, धेरै उडान कतार, मलेसिया र दुबइको
राजु सुवेदी न्युज नेपाल मिडिया सम्बादाता / त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंले २०२१ जुलाई 12 सोमबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका प्रकाशित गरेको छ। उक्त तालिकामा सोमबार हुने सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विवरण दिएको छ।
कोरो’नाले बिस्वब्यापी लक’डा’उन भएपछी बन्द भएका उडानहरु बिस्तारै खुल्दैछ ! उडान खुलेपछिको सबै भन्दा धेरै उडान आज भर्नेछन बिमानहरुले ! आज मात्रै कर्गो तथा नियमित गरेर 27 उडान गर्नेछन ल्याउने लाने गरेर !
सबैभन्दा धेरै उडान कतारको लागि छन ! कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्स ले कतार बाट ल्याउने तथा यात्रु लानेछन ।
त्यसैगरी नेपाल एयरलाइन्स ले नै मलेसिया यात्रु लिएर जानेछ तथा लिएर फर्किनेछ ! हिमालय एयरलाइन्स ले साउदी दमाम तथा बेन्कक र कर्गो उडानको लागि आजै अनुमती लिएको छ !
जजिरा एयर ले कुबेत तुर्किस एयरलाइन्स ले इस्तानबुल बाट र नेपाल एयरलाइन्स ले नै दुबै बाट यात्रु लिएर जाने आउने गर्दछन ! समय तथा बिस्तृत जान्न तल तालिकामा हेर्नुहोस ! आज यात्रा गर्ने सबैको लागि शुभकामना !